Siyaasiyiin eed dusha uga tuuray wasiirka garsoorka Faarax C/qaadir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Siyaasiyiin eed dusha uga tuuray wasiirka garsoorka Faarax C/qaadir
29th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa ku eedeeyey wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka dalka inuu faragelin ku haya Garsoorka Soomaaliya oo ah hay’ad ka madax banaan xukuumadda iyo baarlamanka.
Arrintaan ayaa timid kadib markii dhawaan soo jeedin ka timid wasiirka Garsoorka Faarax C/qaadir oo Golaha Wasiiraddu ogolaadeen xilka looga qaaday Xeer Ilaaliyihii guud ee Qaranka, C/qaadir Maxamed Muuse. Ninkan ayaa xilka looga qaaday wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Max;ud.
Siyaasiga C/llaahi Sheekh Xasan Cali ayaa sheegay in garsoorku uu ahaa hay’ad madax banaan balse ay hadda muuqato in cadaadis xoogan uu ka heysto wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda oo sida uu yiri wasiirkeedu doonayo in dantiisa uu fushado adeega garsoorka dalka.
Dhinaca kale, waxaa arrintaan ka hadlay siyaasiga Salaad Cali Jeelle, wuxuuna sheegay in Faarax C/qaadir uu dhex galay howlo aan howshiisa ahayn, uuna maslaxaddiisa gaarka ah ka dhex fushanayo garsoorka.
Golaha Adeega Garsoorka ayaa iyaguna dhawaan sidaan oo kale ka horyimid xil ka qaadista lagu sameeyey xeer ilaalihii hore ee Qaranka C/qaadir Maxamed Muuse, iyagoo horay u diiday Xeerka Golahaas oo baarlamanka Soomaaliya anisixyey.
AMISOM iyo maamulka Baydhabo & Buulo Barde oo ka shiray amaanka
Somalia:Government Steps Up Efforts to Curb Corruption